အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာသူမြား မဖွဈမနကွေညျ့သငျ့တဲ့ Green Book ဇာတျကား
ဒီနမှေ့ာတော့ လူဖွူ လူမညျးခှဲခွားဆကျဆံခဲ့တဲ့ 1962 နှဈမြားဆီက ဖွဈရပျမှနျ true storyဇာတျလမျးလေးဖွဈတဲ့ Green Book ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးအကွောငျးအနညျးငယျပွောပွခငျြပါတယျ ...ဒီဇာတျကားကို 2018 November မှာ Universal Pictures ကထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး..... သမိုငျးဇာတျကွောငျးနောကျခံဇာတျကား အမြိုးအစားလို့သတျမှတျခဲ့ကွပါတယျ....ဇာတျကားပွသခြိနျ 130 မိနဈရှိပါတယျ.....
91 ကွိမျမွောကျ Academy Awards မှာ Best Picture,Best Original Screenplayဆိုတဲ့ဆုတှနေဲ့အတူ Best Supporting Actor ဆိုတဲ့အကောငျးဆုံးဇာတျပို့ဆုကို လူမညျးမငျးသား Mahershala Ali. ဒုတိယအကွိမျထပျမံရရှိခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ....ဒါ့အပွငျ အခွားဆုပေါငျး 50 နဲ့ ဆနျကာတငျ 89 ဆုစာရငျးဝငျခဲ့ပါသေးတယျ....
အီတလီအမရေီကနျလူမြိုး သာမာနျလူတနျးစားကပေါကျဖှားလာတဲ့ Tony တိုနီဟာ New York City ရဲ့ဘရှနျဆိုတဲ့မွို့မှာကွုံရာကြ ဘနျးအလုပျနဲ့အဆငျပွသေလိုဘဝကိုရုနျးကနျပွီးနထေိုငျလာခဲ့တယျ..သူ့မှာ ဒရောလဈဆိုတဲ့ဇနီးသညျတဈယောကျနဲ့သားတဈယောကျ သမီးတဈယောကျလညျးရှိတဲ့အပွငျ အဖေ..ယောကျဖ..ခယျမစတဲ့ ဆှမြေိုးတသိုကျဟာလညျးသူနဲ့အတူနထေိုငျကွတယျ....
သူဟာအီတလီစဈပွနျတဈယောကျလညျးဖွဈခဲ့တော့ ဘဝရဲ့အခကျအခဲနဲ့အနုအကွမျးမြိုးစုံကိုရငျဆိုငျနိုငျသူလညျးဖွဈတယျ....Copacabana night club မှာအလုပျလုပျနရေငျးအဆောကျအဦးပွငျဆငျဖို့အတှကျအလုပျက ခတ်ေတနားခဲ့ရတယျ....ဒါပမေဲ့ Afrecan American Pianist လူမညျးစန်ဒယား ဂီတပညာရှငျ Dr Don Shirley ဆိုသူနဲ့ အလုပျကိစ်စဆှေးနှေးဖို့ Interview ဖွခှေငျ့ရခဲ့တယျ.....
လူမညျးဂီတပညာရှငျ Don နဲ့ လူဖွူ Tony တို့ဟာစတှတှေ့ခွေ့ငျးဆောကျနဲ့ထှငျးဆိုသလို အပေါကျအလမျးမတညျ့ပါဘူး...Don ကTony ရဲ့ထိုငျခုံထကျမွငျ့တဲ့ ပလငျလိုခုံအမွငျ့မှာထိုငျပွီး .တောတှငျးဘုရငျလို ရှရေောငျတလကျလကျနဲ့အဝတျအစားတှကေိုဝတျစားထားတယျဆိုပဲ....အခနျးထဲမှာလညျး ပရိဘောဂပစ်စညျးအစုံအလငျနဲ့ဆငျစှယျအဆောငျမြား ပနျးအိုးကွီးမြားကိုလညျးတှခေဲ့ရလို့ သူတျောတျောစိတျပကျြမိပါတယျတဲ့....
Don ကစပွီးစညျးကမျးခကျြတခြို့နဲ့ သူ့ရဲ့ခရီးစဉျတှစေပွောပါတယျ...Tony ကအခြို့ကိစ်စတှနေဲ့ သူမကွိုကျတဲ့အခကျြအလကျတှကွေောငျ့ Don ဆီမှာသူရမဲ့ငှပေမာဏကိုထပျတိုးတောငျးပွီးအိမျကိုပွနျလာခဲ့တယျ..အိမျမရောကျခငျ ခြာလီရဲ့အပေါငျဆိုငျမှာ သူ့နာရီလေးကို ဒျေါလာ ၅၀ နဲ့ဝငျပေါငျပွီးငှရေေးကွေးရေးပွသနာကို ဖွရှေငျးလိုကျတယျ.....
မနကျရောကျတော့ Don ကဖုနျးဆကျပါတယျ..သူ့မိနျးမဒရောလဈနဲ့ပွောခငျြပါတယျဆိုပွီး..."ခငျဗြားအမြိုးသားကိုကြှနျတျောနဲ့အတူ ၈ ပါတျလောကျခရီးသှားခှငျ့ပွုနိုငျမလားခငျဗြာ" လို့ခှငျ့တောငျးလိုကျတော့....ဒရောလဈကလညျး ခရဈစမတျအကွိုနကေို့အရောကျပွနျခဲ့ဖို့မှာကွားပွီးခှငျ့ပွုလိုကျရတယျ.. Tony ဟာDonနဲ့အတူ အမရေီကနျတောငျဘကျစှနျးမွို့တှနေဲ့အနောကျအလယျပိုငျးမွို့တှဖွေဈတဲ့ အိုဟိုငျးအိုးစကလို့ ဘာမငျဂမျအထိ ရှဈပါတျကွာအောငျ ကားမောငျးပွီးလိုကျပို့ခဲ့ရတာပေါ့...
ဒီလိုခရီးမှာ လူမညျးတှမေသှားရတဲ့ကနျ့သတျနယျမွတှေကေိုရှောငျရှားပွီး သှားနိုငျဖို့. အစိမျးရောငျ Green Book ကိုခရီးသှားလမျးညှနျအဖွဈယူဆောငျလာခဲ့ရပါတယျ....Don ကကားနောကျခနျးမှာထိုငျပွီး ကားမှနျမြားကိုပိတျကာ အပေါ့အလေးစှနျ့တဲ့ကိစ်စကိုတောငျမလုပျပဲ ငွိမျသကျစှာလိုကျပါလာတာကို တှရေ့သလို Tony ကလညျးစကားကတမြားမြား စီးကရကျတဖှာဖှာနဲ့ ကားမောငျးပို့ခဲ့တာကိုတှရေ့ပါတယျ.....
Tony က, ဟနျပနျအမူအရာတှနေဲ့ လကျတှဘောတှမွှေောကျပွီးစကားပွောရငျးကားမောငျးတာကို Don က,မကွိုကျပဲကားကိုသာဂရုစိုကျမောငျးဖို့ပွောခဲ့တယျ.... Tony ကတီရှပျလိုပေါ့ပါးတဲ့အင်ျကြီကိုဝတျတတျပွီး Don ကတော့ Coat အင်ျကြီကိုသာအမွဲဝတျဆငျတတျပါတယျ...
ဒီနရောမှာ Don နဲ့ Tony ဟာလုံးဝမတူတဲ့ နထေိုငျမှုစံနဈ အယူအဆအတှေးအချေါတှကေ တလှဲပဲဖဈနခေဲ့တာတှရေ့မယျ...လှတျလပျပွီးပေါ့ပါးတဲ့လူနဲ့ အရာရာထိနျးခြုပျပွီးနတေဲ့လူတဈယောကျတို့ဘယျလို ရှဆေ့ကျကွမှာလဲ?
SPOILER ALERT ........ဆကျဖတျခငျြဖတျလို့ရပါတယျနျော....
Don ဟာအခွားလူမညျးမြားနဲ့မတူပဲ ကွီးကယျြခနျးနားပွီး တထီးတနနျးဖွဈခငျြသူတဈယောကျပါ..ဒါကွောငျ့...အတ်တလနျတာက စတိုငျးဝေးတံဆိတျပါတဲ့ စန်ဒယားအမြိုးအစားကိုသာတီးပွီး ဗီသိုဗငျ...ခြို ပငျ စတဲ့မဟာဂန်ဓဝငျတေးသှားမြားကိုပဲတီးခဲ့ပါတယျ...အထကျတနျးလှာ လူကုံထနျလူဖွူ တှကေသူ့လကျသံကိုနားထောငျခငျြလှနျးလို့ ဘယျလောကျပဲဖျောဖျောရှရှေနေဲ့ခရီးဦးကွို ပွုကွပမေဲ့ခှဲခွားတတျတဲ့သူတို့အကငျြ့ကအရိုးစှဲနခေဲ့တယျ... Don ဟာနာကငျြနပေမေဲ့မွိုသိပျပွီး တဈမွို့ပွီးတဈမွို့ ဖြျောဖွရေေးလုပျနလြှေကျပါပဲ.....ဒါကိုမခံမရပျနိုငျပဲ အမွဲခပြေခဲ့သူကတော့ Tony ပဲဖွဈတယျ....
Don ဟာညဈပတျနတေဲ့လူမညျးတညျးခိုဆောငျတှမှောပဲ အိပျစကျရပွီး...လူဖွူတှနေဲ့လညျး သနျ့စငျခနျးကိုအတူမသုံးရသလို အတူစားသောကျခှငျ့လညျးမရပါဘူး...လူဖွူတှနေားသောတဆငျဖို့ Don ဘယျလောကျပဲရငျးနှီးခဲ့ရပမေဲ့ သူပွနျရလိုကျတာကတော့ ကိုယျထိလကျရောကျတှပွေုမူကွတဲ့အတှကျ နာကငျြခဲ့ရတာပဲဖွဈတယျ...သူ့အနုပညာအတှကျ အရာရာကိုသညျးခံခဲ့ပမေဲ့ တခါတရံမှာတော့ မာနနဲ့ပညာကိုထိပါးလာရငျတော့ ဘယျလိုဆုံးဖွတျသငျ့သလဲဆိုတာ Tony ကအလငျးပွလိုကျတယျ....
သူတို့ဟာ လမျးခရီးမှာ အခကျခဲပေါငျးစုံကိုအတူရငျဆိုငျဖွရှေငျးရငျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျနားလညျလာကွတာကို ဒါရိုကျတာက လှလှပပလေးရိုကျပွသှားတယျ....အမရေီကနျရဲ့လှပတဲ့တောတောငျရမွေရှေု့ခငျးနဲ့ဆိုးသှမျးတဲ့ စရိုကျတှကေိုလညျးတှရေ့ပါမယျ....
Tony ရဲ့အယူအဆကတခါတလမှော မှနျသလိုရှိပမေဲ့ တခါတလမှောလညျး Don ရဲ့အယူအဆတှကေမှနျနတေတျပါတယျ...ဥပမာအနနေဲ့ Tony ကိုစကားပွောတဲ့အခါ လယေူလသေိမျး အသံရဲ့အနိမျ့အမွငျ့ စကားလုံးရှေးခယျြမှု...ဒါတှကေိုလိုသလိုရှေးခယျြသုံးစှဲဖို့ လိုမညျဖွဈကွောငျး Don ကပွောခဲ့ပါတယျ....Tony အနဖွေငျ့ဒီထကျပိုလုပျနိုငျကွောငျးကို Don ကသိနလေို့ အကွံပေးခဲ့တာလို့ထငျမွငျမိပါတယျ....
မိမိဖကျကစ ,လိုကျရမှာကွောကျပွီး အထီးကနျြဖွဈနတေဲ့ Don ကိုTony ကသူ့အဈကိုနဲ့ပွနျဆကျသှယျခိုငျးခဲ့တယျ...အနိုငျ့ကငျြ့တတျတဲ့ လူဖွူတှကွေောငျ့ Tony ဟာအမွဲတမျး.Don ကိုနညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ကူညီဖွရှေငျးပေးခဲ့ပွီး သူမပါပဲဘယျကိုမသှားဖို့တားမွဈထားတယျ...Tony ကသူုမိနျးမဒရောလဈဆီကို စာရေးတဲ့အခါ အဖှဲ့အနှဲ့မတတျတဲ့အပွငျစာလုံးပေါငျးတှမေမှနျလို့ Don ကပွနျပွီးကူညီပေးခဲ့တယျ.....
Don ရဲ့တူရိယာပစ်စညျးအခြို့နဲ့ စန်ဒယားပညာတို့ကို တနညျးအားဖွငျ့ Tony ကအရမျးစိတျဝငျစားပွီး အထငျလညျးကွီးပါတယျ...ဒါကွောငျ့လူမညျးတှရှေိတဲ့အမရေီကနျမွောကျပိုငျးကိုချေါသှားပွီး စန်ဒယားတီးစခေဲ့တယျ...အဲ့ဒီမှာ Don ကပနျခြို ဂီတအမြိုးအစားနဲ့ Winter wind ဆောငျးလပွေဆေိုတဲ့သီခငျြးကိုတီးခဲ့ပွီး လူမညျးတေးဂီတအဖှဲ့နဲ့ Blue song သီခငျြးကိုလညျးထပျမံတီးပွခဲ့ပွနျတယျ....လူမညျးတှအေားလုံးလကျခုပျလကျဝါးတီးပွီး ပြျောရှငျနကွေတဲ့အထဲမှာ လူဖွူ Tony ကပိုလို့ပြျောနတောကို Don တှလေို့ကျရတယျ....
လူဖွူ Tony ကကားမောငျးပွီး နောကျခနျးမှာအကအြနထိုငျလိုကျနတေဲ့ လူမညျး Don ကိုလူတှကေလကျမခံပမေဲ့ Tony ဂရုမစိုကျခဲ့ပါဘူး...Don ရဲ့အမရေီကနျတောငျဖကျစှနျးနဲ့အနောကျအလယျပိုငျးဒသေ ၉ နရောရဲ့ဖြျောဖွမှေုအပွီး နယူးရော့ရဲ့ ခရဈစမတျအကွိုနကေို့အမှီရောကျအောငျ သူတို့ဘယျလိုပွနျလာခဲ့ကွသလဲဆိုတာ.... ဇာတျကားကို ကွညျ့ရှု့လိုကျပါ.... မတ်ေတာတရားတှပှေားမြားနိုငျပါစေ....
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ Green Book ဇာတ်ကား
ဒီ​နေ့မှာ​တော့ လူဖြူ လူမည်း​ခွဲခြားဆက်​ဆံခဲ့တဲ့ 1962 နှစ်​များဆီက ဖြစ်​ရပ်​မှန်​ true storyဇာတ်​လမ်း​လေးဖြစ်​တဲ့ Green Book ဆိုတဲ့ဇာတ်​ကား​လေးအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ် ​...ဒီဇာတ်​ကား​ကို 2018 November မှာ Universal Pictures ကထွက်​ရှိခဲ့တာဖြစ်​ပြီး..... သမိုင်းဇာတ်ကြောင်းနောက်ခံဇာတ်ကား အမျိုးအစားလို့သတ်​မှတ်​ခဲ့ကြပါတယ်​....ဇာတ်​ကားပြသချိန်​ 130 မိနစ်ရှိပါတယ်​.....
91 ကြိမ်​​မြောက်​ Academy Awards မှာ Best Picture,Best Original Screenplayဆိုတဲ့ဆု​တွေနဲ့အတူ Best Supporting Actor ဆိုတဲ့အ​ကောင်းဆုံးဇာတ်​ပို့ဆုကို လူမည်းမင်းသား Mahershala Ali. ဒုတိယအကြိမ်​ထပ်​မံရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်​ပါတယ်​....ဒါ့အပြင်​ အခြားဆု​ပေါင်း 50 နဲ့ ဆန်​ကာတင်​ 89 ဆုစာရင်းဝင်​ခဲ့ပါ​သေးတယ်​....
အီတလီအ​မေရီကန်​လူမျိုး သာမာန်​လူတန်းစားက​ပေါက်​ဖွားလာတဲ့ Tony တိုနီဟာ New York City ရဲ့ဘရွန်​ဆိုတဲ့မြို့မှာကြုံရာကျ ဘန်းအလုပ်နဲ့​အဆင်​​ပြေသလိုဘဝကိုရုန်းကန်​​ပြီး​နေထိုင်​လာခဲ့တယ်​..သူ့မှာ ဒ​ရောလစ်​ဆိုတဲ့ဇနီးသည်​တစ်​​ယောက်​နဲ့သားတစ်​​ယောက်​ သမီးတစ်ယောက်​လည်းရှိတဲ့အပြင်​ အ​ဖေ..​ယောက်​ဖ..ခယ်​မ​စတဲ့ ​ဆွေမျိုးတသိုက်​ဟာလည်းသူနဲ့အတူ​နေထိုင်​ကြတယ်​....
သူဟာအီတလီစစ်​ပြန်​တစ်​​​​ယောက်​လည်းဖြစ်​​ခဲ့​တော့ ဘဝရဲ့အခက်​အခဲနဲ့အနုအကြမ်းမျိုးစုံကိုရင်​ဆိုင်​နိုင်​သူလည်းဖြစ်​တယ်​....Copacabana night club မှာအလုပ်​လုပ်​​နေရင်းအ​ဆောက်​အဦးပြင်​ဆင်ဖို့အတွက်​အလုပ်​က​ ခေတ္တနားခဲ့ရတယ်​....ဒါ​ပေမဲ့ Afrecan American Pianist လူမည်း​စန္ဒယား ဂီတပညာရှင်​ Dr Don Shirley ​​ဆိုသူနဲ့ အလုပ်​ကိစ္စ​ဆွေး​နွေးဖို့ Interview ​​ဖြေခွင့်​ရခဲ့တယ်​.....
လူမည်း​ဂီတပညာရှင်​ Don နဲ့ လူဖြူ Tony တို့ဟာစ​တွေ့​တွေ့ခြင်း​ဆောက်​နဲ့ထွင်းဆိုသလို အ​ပေါက်​အလမ်းမတည့်​ပါဘူး...Don ကTony ရဲ့ထိုင်​ခုံထက်​မြင့်​တဲ့ ပလင်​လိုခုံအမြင့်​မှာထိုင်​ပြီး .​တောတွင်း​ဘုရင်​လို ​ရွှေ​ရောင်​တလက်​လက်​နဲ့အဝတ်​အစား​တွေကိုဝတ်​စားထားတယ်​ဆိုပဲ....အခန်းထဲမှာလည်း ​ပ​ရိ​ဘောဂပစ္စည်း​အစုံအလင်​နဲ့ဆင်​စွယ်​အ​ဆောင်​များ ပန်းအိုးကြီးများ​ကိုလည်း​တွေ့ခဲ့ရလို့ သူ​တော်​​တော်​စိတ်​ပျက်​မိပါတယ်​တဲ့....
Don ကစပြီးစည်းကမ်းချက်​တချို့နဲ့ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်​​တွေစ​ပြော​ပါတယ်​...Tony ကအချို့ကိစ္စ​တွေနဲ့ သူမကြိုက်​တဲ့အချက်​အလက်​​တွေကြောင့်​ Don ဆီမှာသူရမဲ့​ငွေပမာဏကိုထပ်​တိုး​တောင်းပြီးအိမ်​ကိုပြန်​လာခဲ့တယ်​..အိမ်​မ​ရောက်​ခင်​ ချာလီရဲ့အ​ပေါင်​ဆိုင်​မှာ သူ့နာရီ​လေးကို ​ဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့ဝင်​​ပေါင်​ပြီး​ငွေ​ရေး​ကြေး​ရေးပြသနာကို ​ဖြေရှင်းလိုက်​တယ်​.....
မနက်​​ရောက်​​တော့ Don ကဖုန်းဆက်​ပါတယ်​..သူ့မိန်းမဒ​ရောလစ်​နဲ့​ပြောချင်​ပါတယ်​ဆိုပြီး..."ခင်ဗျားအမျိုးသား​ကိုကျွန်​​တော်​နဲ့အတူ ၈ ပါတ်​​လောက်​​ခရီး​သွားခွင့်​​ပြုနိုင်မလားခင်ဗျာ" လို့ခွင့်​​တောင်းလိုက်​တော့....ဒ​ရောလစ်​ကလည်း ခရစ်​စမတ်​အကြို​နေ့ကို​​အ​ရောက်​ပြန်​ခဲ့ဖို့မှာကြားပြီးခွင့်​ပြုလိုက်​ရတယ်​.. Tony ဟာDonနဲ့အတူ အ​မေရီကန်​​တောင်​ဘက်​စွန်းမြို့​တွေနဲ့အ​နောက်​အလယ်​ပိုင်းမြို့​တွေဖြစ်​တဲ့ အိုဟိုင်းအိုးစကလို့ ဘာမင်​ဂမ်​အထိ ရှစ်​ပါတ်​ကြာ​အောင်​ ကား​မောင်းပြီးလိုက်​ပို့ခဲ့ရတာ​ပေါ့...
ဒီလိုခရီးမှာ လူမည်းေ​တွမသွားရတဲ့ကန့်သတ်​နယ်​​မြေ​တွေကို​ရှောင်​ရှားပြီး သွားနိုင်​ဖို့. အစိမ်း​ရောင်​ Green Book ကိုခရီးသွားလမ်းညွှန်​အဖြစ်​ယူ​ဆောင်​လာခဲ့ရပါတယ်​....Don ကကား​နောက်​ခန်းမှာထိုင်​ပြီး ကားမှန်​များကိုပိတ်​ကာ အ​ပေါ့အ​လေးစွန့်​တဲ့ကိစ္စကို​တောင်​မလုပ်​ပဲ ငြိမ်​သက်​စွာလိုက်​ပါလာတာကို​ ​တွေ့ရသလို Tony ကလည်းစကားကတများများ စီးကရက်​တဖွာဖွာနဲ့ ကား​မောင်းပို့ခဲ့တာကို​တွေ့ရပါတယ်​.....
Tony က, ဟန်​ပန်​အမူအရာ​တွေနဲ့ ​လက်​​တွေဘာ​တွေ​မြှောက်​ပြီးစကား​ပြောရင်းကား​​မောင်းတာကို Don က,မကြိုက်ပဲ​ကားကိုသာဂရုစိုက်​​မောင်းဖို့​ပြောခဲ့တယ်​.... Tony ကတီရှပ်​လို​ပေါ့ပါးတဲ့အင်္ကျီကိုဝတ်​တတ်​ပြီး Don က​တော့ Coat အင်္ကျီကိုသာအမြဲဝတ်​ဆင်​တတ်​ပါတယ်​...
ဒီ​နေရာမှာ Don နဲ့ Tony ဟာလုံးဝမတူတဲ့ ​နေထိုင်မှုစံနစ်​ အယူအဆအ​တွေးအ​ခေါ်​တွေက တလွဲပဲဖစ်​​နေခဲ့တာ​တွေ့ရမယ်​...လွတ်​လပ်​ပြီး​ပေါ့ပါးတဲ့လူနဲ့ အရာရာထိန်းချုပ်​ပြီး​နေတဲ့လူတစ်​​ယောက်​တို့ဘယ်​လို ​ရှေ့ဆက်​ကြမှာလဲ?
SPOILER ALERT ........ဆက်​ဖတ်​ချင်​ဖတ်​လို့ရပါတယ်​​နော်​....
Don ဟာအခြားလူမည်း​များနဲ့မတူပဲ ကြီးကျယ်​ခန်းနားပြီး တထီးတနန်းဖြစ်​ချင်​သူတစ်​​ယောက်​ပါ..ဒါ​ကြောင့်​...အတ္တလန်​တာက စတိုင်း​ဝေးတံဆိတ်​ပါတဲ့ စန္ဒယားအမျိုးအစားကိုသာတီးပြီး ဗီသိုဗင်​...ချို ပင်​ စတဲ့မဟာဂန္ဓဝင်​​တေးသွားများကိုပဲတီးခဲ့ပါတယ်​...အထက်​တန်းလွှာ လူကုံထန်​​လူဖြူ​ ​တွေကသူ့လက်​သံကိုနား​ထောင်ချင်​လွန်းလို့ ဘယ်​​လောက်​ပဲ​ဖော်​​​ဖော်​​ရွေ​ရွေနဲ့ခရီးဦးကြို ပြုကြ​ပေမဲ့ခွဲခြားတတ်​တဲ့သူတို့အကျင့်ကအရိုးစွဲ​​နေခဲ့တယ်​... Don ဟာနာကျင်​​နေ​ပေမဲ့မြိုသ်ိပ်ပြီး တစ်​မြို့ပြီးတစ်​မြို့ ​ဖျော်​​ဖြေ​ရေးလုပ်​​နေလျှက်​ပါပဲ.....ဒါကိုမခံမရပ်​နိုင်​ပဲ အမြဲ​ချေပခဲ့သူက​တော့ Tony ပဲဖြစ်​တယ်​....
Don ဟာညစ်​ပတ်​​နေတဲ့လူမည်း​တည်းခို​ဆောင်​​တွေမှာပဲ အိပ်​စက်​ရပြီး...လူဖြူ​တွေနဲ့လည်း သန့်​စင်​ခန်းကိုအတူမသုံးရသလို အတူစား​သောက်​ခွင့်​လည်းမရပါဘူး...လူဖြူ​တွေနား​သောတဆင်​ဖို့ Don ဘယ်​​လောက်​ပဲရင်းနှီးခဲ့ရ​ပေမဲ့ သူပြန်​ရလိုက်​တာက​တော့ ကိုယ်​ထိလက်​​ရောက်​​တွေပြုမူကြတဲ့အတွက်​ နာကျင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်​တယ်​...သူ့ အနုပညာအတွက်​ အရာရာကိုသည်းခံခဲ့​ပေမဲ့ တခါတရံမှာ​တော့ မာနနဲ့ပညာကိုထိပါးလာရင်​​တော့ ဘယ်​လိုဆုံးဖြတ်​သင့်​သလဲဆိုတာ Tony ကအလင်းပြလိုက်တယ်​....
သူတို့ဟာ လမ်းခရီးမှာ အခက်​​ခဲ​ပေါင်းစုံကိုအတူရင်​ဆိုင်​​ဖြေရှင်းရင်း တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​နားလည်​လာကြတာကို ဒါရိုက်​တာက လှလှပပ​လေးရိုက်​ပြသွားတယ်​....အ​မေရီကန်​ရဲ့​လှပတဲ့​တော​တောင်​​ရေ​မြေရှု့ခင်းနဲ့​ဆိုးသွမ်းတဲ့ စရိုက်​​တွေကိုလည်း​တွေ့ရပါမယ်​....
Tony ရဲ့အယူအဆကတခါတ​လေမှာ မှန်​သလိုရှိ​ပေမဲ့ တခါတ​လေမှာလည်း Don ရဲ့အယူအဆ​တွေကမှန်​​နေတတ်​ပါတယ်​...ဥပမာအ​နေနဲ့ Tony ကိုစကား​ပြောတဲ့အခါ ​လေယူ​လေသိမ်း အသံရဲ့အနိမ့်​အမြင့်​ စကားလုံး​ရွေးချယ်​မှု...ဒါ​တွေကိုလိုသလို​ရွေးချယ်​သုံးစွဲဖို့ လိုမည်​ဖြစ်​​ကြောင်း Don က​ပြောခဲ့ပါတယ်​....Tony အ​နေဖြင့်​ဒီထက်​ပိုလုပ်​နိုင်​​ကြောင်းကို Don ကသိ​နေလို့ အကြံ​ပေးခဲ့တာလို့ထင်​မြင်​မိပါတယ်​....
မိမိဖက်​ကစ ,လိုက်​ရမှာ​ကြောက်​ပြီး အထီးကျန်​ဖြစ်​​​နေတဲ့ Don ကိုTony ကသူ့ အစ်ကိုနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်​ခိုင်းခဲ့တယ်​...အနိုင့်​ကျင့်​တတ်​တဲ့ လူဖြူ​တွေ​ကြောင့်​ Tony ဟာအမြဲတမ်း.Don ကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကူညီ​ဖြေရှင်း​ပေးခဲ့ပြီး သူမပါပဲဘယ်​ကိုမသွားဖို့တားမြစ်​ထားတယ်​...Tony ကသူုမိန်းမ​ဒ​ရောလစ်​ဆီကို စာ​ရေးတဲ့အခါ အဖွဲ့အနွဲ့မတတ်​တဲ့အပြင်​စာလုံး​ပေါင်း​တွေမမှန်​လို့ Don ကပြန်ပြီးကူညီ​ပေးခဲ့တယ်​.....
Don ရဲ့တူရိယာပစ္စည်းအချို့နဲ့ စန္ဒယားပညာတို့ကို တနည်းအားဖြင့်​ Tony ကအရမ်းစိတ်​ဝင်​စားပြီး အထင်​လည်းကြီးပါတယ်​...ဒါ​ကြောင့်​လူမည်းေ​​တွရှိတဲ့အ​မေရီကန်​​မြောက်​ပိုင်းကိုေ​ခ်ါသွားပြီး စန္ဒယားတီး​စေခဲ့တယ်​...အဲ့ဒီမှာ Don ကပန်​ချို ဂီတအမျိုးအစားနဲ့ Winter wind ​ဆောင်း​လေ​ပြေဆိုတဲ့သီချင်းကိုတီးခဲ့ပြီး လူမည်းေ​တးဂီတအဖွဲ့နဲ့ Blue song သီချင်းကိုလည်းထပ်​မံတီးပြခဲ့ပြန်​တယ်​....လူမည်း​တွေအားလုံးလက်​ခုပ်​လက်​ဝါးတီးပြီး ​ပျော်​ရွှင်​​နေကြတဲ့အထဲမှာ လူဖြူ Tony ကပိုလို့​ပျော်​​နေတာကို Don ​တွေ့လိုက်​ရတယ်​....
လူဖြူ Tony ကကား​မောင်းပြီး ​နောက်​ခန်းမှာအကျအနထိုင်​လိုက်​​နေတဲ့ လူမည်း Don ကိုလူ​တွေကလက်​မခံ​ပေမဲ့ Tony ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး...Don ရဲ့အ​မေရီကန်​​တောင်​ဖက်​စွန်းနဲ့အ​နောက်​အလယ်​ပိုင်း​ဒေသ ၉ ​နေရာရဲ့​ဖျော်​​ဖြေမှုအပြီး နယူး​ရော့ရဲ့ ခရစ်​စမတ်​အကြို​နေ့ကိုအမှီ​ရောက်​​အောင်​ သူတို့ဘယ်​လိုပြန်​လာခဲ့ကြသလဲဆိုတာ.... ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရှု့လိုက်ပါ.... ​​မေတ္တာတရား​တွေပွားများနိုင်​ပါ​စေ....
အရေးကွီးတဲ့ Note တှကေိုဘယျလိုမှတျသားသငျ့သလဲ